Ukuzaliswa ngokutsha kweQela | Ngeentlanzi
El iqela lezinto eziphilayo ze-hermaphrodite, efikelela ekuvuthweni ngokwesondo eneminyaka emihlanu kwaye iba yindoda ukusukela kwiminyaka elishumi, nangona amanye amabhinqa enokuhlala enjalo iminyaka emininzi, de afikelele kubungakanani obukhulu.
Kwiminyaka elishumi ubukho babaqeshi buqinisekisiwe kwiindawo ezisemantla ngakumbi, nto leyo ebonisa ukuba ukuzala kwenzekile ngakumbi emantla kunokuba bekucingwa ngaphambili. Izifundo ezininzi zibonise ukuba eInzala yeqela kwindawo ekhuselweyo yeeMedic Islands.
Umcimbi we ukuzala kwenzeka ngoJulayi kwaye kuyaqhubeka kuye ku-Agasti, Ngokuhambelana nemihla yokujikeleza inyanga. Nangona ezinye iipateni ezinxulumene nokuzala ziye zaqwalaselwa, isenzo sokukhutshwa kweemveliso zangasese asiqinisekiswanga, kodwa ukubekwa esweni ngokukodwa kwamabhinqa ama-ovate, ayaziwa ngamabala ajikeleze amehlo, angaze ahambelane nabantu ababini, abonise ukuba ezi Iphinde yavela ingenanto yamaqanda emva kweentsuku ezimbalwa, ubungqina obungenakuphikiswa bokuba kwenzeke ukuzala. Amaqanda, njengazo zonke iintlobo ze-serranids, unyana ipelagic.
Iqela li malunga Iintlanzi eziqinileyo nezomeleleyo. Intloko, amehlo nomlomo zinkulu. Umhlathi ongezantsi udlula lowo uphezulu. I-maxilla inezikali kunye ne-supermaxilla, uphawu olwabelana ngayo nabo bonke abo baqala kwaye lahlulahlula Uhlobo lweSranranus.
Isisiseko sentlanzi, umthandi wasezantsi onamatye yenziwe ngeebhloko ezinkulu apho ifumana indawo yokuhlala ngokwemilinganiselo yayo. Ubunzulu obufunyenwe buyahluka phakathi kwe-5 kunye ne-400 yeemitha, kodwa ukuhanjiswa kwemetric ngumsebenzi wenqanaba loxinzelelo lokuloba oluphantsi kwalo.
Eyona nto Ukutya kwii-cephalopods, kuba uziva enomdla okhethekileyo, nangona engazideli ii-crustaceans okanye enye intlanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Ukuveliswa kwakhona kweqela